Samsung Android Lollipop 5.1 ဖုန်းတွေတော်တော်များများ Factory Reset ချပြီးတဲ့နောက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ This Device was Reset. To Continue Sign in withaGoogle Account that was previously synced on this device ဖြေရှင်းနည်း ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
Samsung Android Lollipop 5.1 ဖုန်းတွေတော်တော်များများ Factory Reset ချပြီးတဲ့နောက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ This Device was Reset. To Continue Sign in withaGoogle Account that was previously synced on this device ဖြေရှင်းနည်း
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Tuesday, May 24, 2016 AccountProblem, AndroidProblem, AndroidSamsung No comments
ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး ဒီပို့စ်လေးကို ကိုယ်တိုင်စမ်းသပ်ပြီး ပြန်ရှယ်ရေးပေးလိုက်ပါသည်။
Samsung Android Lollipop 5.1 ဖုန်းတွေတော်တော်များများ Factory Reset ချပြီးတဲ့နောက် ကြုံတွေ့ရတဲ့ This Device was Reset. To Continue Sign in withaGoogle Account that was previously synced on this device ဖြေရှင်းနည်း“
ကျွန်တော်တို့ Samsung ဖုန်းမှာ G-mail အကောက်ရဲ့ Password မေ့သွားတာဖြစ်ဖြစ် Screen lock မေ့သွားတာဖြစ်ဖြစ် Recovery Mode ထဲဝင်ပြီးတော့ Data Wipe / Factor Reset ချလေ့ရှိကြပါသည်။
ဒီလိုပြသနာတွေကို Samsung Android Lollipop 5.1 ဖုန်းတွေမှာ အဖြစ်များဆုံးဖြစ်ပါသည်။
1. OTG Data Cable with Pendrive or Micro SD Card with Adapter for Connect with Device. (လက်ရှိသုံးခဲ့တာက အောက်ဖေါ်ပြထားတဲ့ပုံ OTG Data Cable with Pendrive နဲ့ပါ။)
2. Your Device Must Support OTG Cable for use this Method.(လက်ရှိစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ဖုန်းက J2နဲ့ဖြစ်ပါသည်။)
3. samsung bypass google verify apk ကို အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါသည်။
(၁) ကွန်ပျူတာမှ ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ Samsung bypass google verify apk လေးကို Pendrive or memory card ထဲသို့ အဲဒီဖိုင်ကို ကူးထည့်လိုက်ပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ ဖုန်းmemory ထဲလည်း ကူးထည့်လို့ရပါသည်။)
(၂) ပြီးရင် Samsung ဖုန်းနဲ့ချိတ်လိုက်ပါ။
(ချိတ်လိုက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် File Manager လေး ပေါ်လာပါလိမ့်မည်။)
(၃) အဲဒီကကူးထည့်ထားတဲ့ Samsung bypass google verify apk လေးကို ရှာပြီး Install လုပ်ရပါမည်။
ဒါပေမဲ့ Installed Blocked ကို ဖွင့်ပေးဖို့ Setting Button လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။ Unknow Sources Button လေးကို on ပေးလိုက်ပါ။
Install ကို မမြင်ရရင် black button လေးကိုနှိပ်ပြီး အဲဒီ Samsung bypass google verify apk လေးကို Install ပြန်လုပ်ရပါမည်။
(၁) Install လုပ်ပြီးတဲ့အခါ Open Button ကိုနှိပ်ပေးရပါမည်
(၂) Open Button ကို နှိပ်ပေးလိုက်တာနဲ့အပြိုင်နက် Phone Setting ဆီရောက်သွားပါမည်။
(၃) Backup and Reset ကိုလိုက်ရှာပြီး Factory Data Reset ကို ရွေးပြီး DELETE ALL button ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးတဲ့အခါ Android ပုံလေးနဲ့ အော်တို Erasing လုပ်နေပါလိမ့်မည်။
ပုံမှန်အတိုင်း Language တွေရွေး၊
To Continue Sign in withaGoogle Account that was previously synced on this device“
Create Account ဆိုတာကိုတွေ့ရပါပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ကဲအကောက်သစ်နဲ့လုပ်ပြီး ၀င်သွားလိုက်ရင် အဆင်ပြေသွားပါပြီးး။
အဆင်မပြေခဲ့ရင် ဗီဒီယိုလေးကို ကြည့်လိုက်နော်..